I-china lady enemibala evulekileyo iinzwane zeegusha zeslipper mveliso kunye nabathengisi | Yiruihe
Inenekazi elinemibala evulekileyo yeZinyosi zesikhumba
Uyilo lweenzwane ezivulekileyo lunokunceda uzwane lwakho ukuba luzive “lukhululekile” ； Kodwa i-vamp yesikhumba segusha isenokwenza ukuba unyawo lwakho lufudumale kwaye lukhululeke. Irabha kuphela iya kuthintela isiliphu ukukhusela ukhuseleko lwakho.
Vamp: Isikhumba segusha
Kunjani ukuba nesibini see slippers ezishushu, ezithambileyo neziphefumlayo? Isiliphu senkuku segusha esimibalabala esivulekileyo siyakukuxelela impendulo.
Ezi slippers ezinemibala evulekileyo yamakhosikazi ezimvu evulekileyo, zombini ezingaphezulu nezingaphakathi, zenziwe zangaphezulu kwesikhumba segusha saseOstreliya.
Zithini izibonelelo zeslippers zofele? Khawufane ucinge, xa udiniwe emva komsebenzi wosuku, okanye emva kohambo nabahlobo, ukuba nezi slippers ezithambileyo nezitofotofo zezofele azizukukunika ulonwabo lokuphumla okungaphaya, kodwa zikunike nemvakalelo yokuphakama xa ubuyela kwizinto zendalo. ayisiyiyo iinyawo zokuphumla kuphela, kodwa kunye nomgangatho wobomi ukuze wonwabe.
Kwaye isiliphu semfama asiphathanga iimpahla zokulala ngokuqhula, nangona sinxibe isilayidi segusha ukungena nokuphuma, asikophuli sithandwa.
Izinto zendalo zinezibonelelo ezingenakuthelekiswa nanto xa kuthelekiswa nezinto zokwenziwa. Zibalasele ngakumbi ekuthinteleni ukuzala kweebhaktiriya kunye nokubonelela ngononophelo olusempilweni kumalungu osapho.
Okukuphela kwento yenziwe ngerabha, engatyibilikiyo, efudumeleyo kunye nokukhanya, ikunika imeko yokhuseleko kuwo onke amacala.
Iigusha ziyaziwa ngokulondolozwa kobushushu, ngakumbi isikhumba semvu sase-Australia, esigcina iinyawo zakho zishushu ebusika obubandayo. Ngapha koko, ufele lwegusha lunokungena komoya okuhle, okungayi kubamba nkqu nokuba kunxitywe ixesha elide. nkqu ehlotyeni elishushu nako akuyi kubakho bushushu buphezulu kakhulu, kuba esi sisiliphu semfele segusha naso sesona sikhethiweyo kwigumbi elinomoya opholileyo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ufanelwe okona kulungileyo, isibini esinxibe isikhumba semvu esikunika amava obomi obutofotofo.
Egqithileyo Inenekazi elinemibala evaliweyo iinzwane zeegusha
Okulandelayo: I-Lady Cross Vamp iigusha zeSlipper
Ingqolowa epheleleyo yeenkomo zamadoda zesikhumba kunye ne-EVA yodwa
I-Lady Cross Vamp iigusha zeSlipper
I-Lady Cuff yangaphakathi yeSlipper Slipper
ILady Sheepskin Boot emfutshane enemibala ephindwe kabini yodwa
Amadoda Sheepskin Slipper ngokukhanya kweRubber kuphela
ILady Cuff Wool Slipper